'रअ' प्रमुखलाई भेटेपछि ओलीलाई प्रश्न: तपाईको हैसियत भारतीय खुफिया एजेन्सीको प्रमुखजस्तै हो?Nepalpana - Nepal's Digital Online
'रअ' प्रमुखलाई भेटेपछि ओलीलाई प्रश्न: तपाईको हैसियत भारतीय खुफिया एजेन्सीको प्रमुखजस्तै हो?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग भेट गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
पार्टीकै नेता विरोधमा उत्रिएका छन् । यसैक्रममा रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीले यो भेटमा कडा आपत्ति जनाएको छ ।
साझाले यो भेटले देशको प्रधानमन्त्रीको रअ प्रमुखकै हैसियतमा झरेको भन्दै सार्वभौम राज्यका लागि यो स्वीकार्य नभएको उल्लेख गरेको छ । ‘के रअ प्रमुख गोयललाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो ‘विशेष दूत’का रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पठाएका हुन् ?
यदि हुन् भने प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यालयले तुरुन्त स्पष्ट पारोस्। होइन भने, आफ्ना खुफिया एजेन्सी प्रमुखलाई विशेष विमानबाट नेपाल पठाएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटाउनुबाट भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो खुफिया एजेन्सीको प्रमुखको तहमा झारेको संकेत गर्दछ,’ प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साझाले यसलाई प्रधानमन्त्रीकै तहबाट नेपालको कूटनीतिक सम्मान र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि भएको ठाडो आक्रमण भएको संज्ञा दिएको छ । ‘के रअका प्रमुख उनको नेपाली समकक्षी नेपालको गुप्तचर निकायका प्रमुखको निमन्त्रणामा आएका हुन् ? के त्यसरी आउँदा उनले प्रधानमन्त्रीसँग ‘शिष्टाचार भेट’ गरेका हुन् ? यदि हुन् भने त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यालयले तुरुन्त स्पष्ट पारोस्। होइन भने, देशको प्रधानमन्त्रीको मर्यादाको ख्याल भयो कि भएन ?,’ पार्टीले प्रश्न गरेको छ ।
एकातिर परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक वार्ताका लागि गरेको पत्राचारको जवाफ दिल्लीले नदिनु र अर्कोतिर खुफिया एजेन्सीका प्रमुख आएर सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुले नेपाली कुटनीति भारतसँगको सम्बन्धमा कुन तहमा गिरेको छ भन्ने स्पष्ट भएको साझाको ठहर छ । ‘त्यसले अन्य देशहरूसँगको हाम्रा कुटनीतिक सम्बन्धलाई पनि अत्यन्तै हलुका र सस्तो बनाइदिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साझा पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो लज्जाजनक रवैयाको गम्भीर भर्त्सना गर्दै दशकौँदेखि नेपालका शीर्ष भनिएका नेताहरूले देखाइरहेको आचरणकै निरन्तरता भएको जिकिर गरेको छ ।
कार्तिक ७, २०७७ शुक्रवार ११:०७:२४ बजे : प्रकाशित